Mino Raiola Oo Beeniyay Inuu Dalbaday £ 17m Oo Ah Lacagta Erling Braut Haaland
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Mino Raiola oo beeniyay inuu dalbaday £ 17m oo ah lacagta Erling...
Wakiilka Erling Braut Haaland Mino Raiola ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu dalbaday £ 17m heshiis kasta oo ku saabsan weeraryahanka Borussia Dortmund .
Raiola iyo Haaland aabihii Alf-Inge Haaland ayaa usbuucii hore ka soo dagay Spain si ay wadahadalo ula yeeshaan Barcelona iyo Real Madrid , oo labaduba doonaya inay heshiis la gaaraan weeraryahanka Dortmund xagaagan.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in wakiilada Haaland labaduba ay dalbanayeen lacag dhan £ 17m midkiiba haddii ay si guul leh ugala xaajoodaan u dhaqaaqista laacibka reer Norway, laakiin Raiola ayaa baraha bulshada ku beeniyay wararkaas.
53 jirkaan ayaa fariin fudud ku soo qoray Twitter-ka kaas oo uu ku aqriyay “warar been abuur ah oo dhaqso iyo fog u socdaala” habeenkii Axada, iyadoo mala awaalnimada mustaqbalka Haaland ay sii xoogeysaneyso.
Kooxda ka socota Haaland ayaa la fahamsan yahay inay qorsheynayeen wadahadalo ay la furaan kooxaha Premier League ka hor inta aan dib loo furin suuqa kala iibsiga, iyadoo Manchester United , Manchester City iyo Chelsea ay dhamaantood lala xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan 20 jirkaan isbuucyadii la soo dhaafay.
Si kastaba ha noqotee, Haaland qudhiisa ayaa la rumeysan yahay inuu dalbaday inuu ka garab ciyaaro ninka ay dhalashada wadaagaan ee Martin Odegaard , kaasoo mustaqbalkiisa Real Madrid haatan hawada ku jiro ka dib amaah cajiib ah uu ku qaatay Arsenal.
Previous articleKooxo waaweyn oo baacsanayaan weeraryahanka xulka France iyo barcelona Osmane Dambele.
Next articleReal madrid oo soo xulatay safka ay kaga hortageyso kooxda Liverpool habeen dambe.